Vaovao - Ny tsy fitovizan'ny sarimihetsika mihena PE / PVC / POF
Ny tsy fitovizan'ny sarimihetsika mihena PE / PVC / POF
1. Famaritana samihafa:
Ny horonantsary PE dia fitaovana iray tena henjana tokoa, ary tsy mora ny manorotoro miaraka amin'ireo mpamaky plastika mahazatra. Satria malefaka sy henjana ny sarimihetsika PE, tsy mora ny manapotipotika, raha tsy hiteny ny hafanan'ny hafanana avo lenta amin'ny fitaovana hafainganam-pandeha, izay hahatonga ny LDPE hitsonika sy hifikitra amin'ny lelany. Ny pelletizing PE dia azo apetraka mivantana ao amin'ny seranan-tserin'ny extruder ho any anaty tadiny, ary ny sarimihetsika PE dia notaritaritin'ny herin'ny herin'ny visy mba hampafana, handrendrika ary hamoaka ny pelletize. Ny fitaovana ambaratonga voalohany naverina tamin'ny laoniny dia mbola azo atsofoka horonantsary, ampiasaina amin'ny fonosana tsy sakafo sy fanafody, ary be mpampiasa koa amin'ny famokarana ny hoditra Oxford sy ny labasy, miaraka amin'ny ho avy mamiratra.
PVC polyvinyl chloride, miaraka amin'ny akora fanampiny hanamafisana ny fanoherana ny hafanana, ny hamafiny, ny fikojakojana, sns. Ny sosona ambonin'ity sarimihetsika ambonin'ity dia ny lacquer, ny singa fototra eo afovoany dia ny polyvinyl chloride, ary ny sosona ambany kosa dia adhesive mifono miverina. Izy io dia karazana fitaovana sentetika izay tena tiana, malaza ary be mpampiasa eran'izao tontolo izao. Anisan'ireo fitaovana afaka mamokatra horonantsary misy habe telo, ny PVC no fitaovana mety indrindra.
Ny POF dia midika hoe horonantsary mihena hafanana. Ny POF dia mijoro ho sarimihetsika multi-layer co-extruded polyolefin heat shrinkable film. Mampiasa polyethylene ambany hakitroka toy ny sosona afovoany (LLDPE) sy co-polypropylene (pp) ho toy ny sosona anatiny sy ivelany. Atao plastika sy esorina ao ivelan'ny masinina, ary avy eo amboarina amin'ny alàlan'ny dingana manokana toy ny famoronana die sy ny fiakaran'ny vidim-piainana.
2. Fampiasana samihafa:
Ny horonantsary mihena hafanana amin'ny PE dia be mpampiasa amin'ny famonosana divay, kapoaka, rano mineraly, zava-pisotro isan-karazany, lamba ary vokatra hafa. Ny vokatra dia manana fahalalahana tsara, fanoherana ny fiantraikany ary fanoherana ny ranomaso, ary tsy mora vaky sy matahotra. Mamandoana sy tahan'ny fihenan'ny haavony.
Noho ny fananana tsy manam-paharoa an'ny PVC (orana-porofo, mahazaka afo, manohitra ny static, mora miendrika endrik'olona) ary mampidina ambany sy manana endrika avo lenta ny PVC, dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fananganana sy ny indostrian'ny fonosana. Noho izany, ny sarimihetsika PVC dia misy mangarahara avo, gloss tsara ary mihena. Endri-javatra amin'ny taha ambony.
Ny POF dia karazana horonantsary mampihena hafanana, ampiasaina amin'ny vokatra fonosana amin'ny endriny mahazatra sy tsy ara-dalàna. Noho ny fiarovana tsy misy poizina sy tontolo iainana, mangarahara avo, fihenam-bidy avo, fitomboan'ny hafanana, gloss avo, henjana, fanoherana ny ranomaso, manana ny mampiavaka ny fihenan'ny hafanana mitovy izy ary mety amin'ny fonosana haingam-pandeha haingana. Izy io dia vokatra azo soloina amin'ny horonantsary nentim-paharazana hafanana PVC.
Ampiasaina be amin'ny famatsiana fiara, vokatra plastika, fitaovana, boky, elektronika, board circuit, MP3, VCD, asa-tanana, sary sy vokatra hazo hafa, kilalao, fanafody famonoana bibikely, kojakoja ilaina isan'andro, sakafo, kosmetika, zava-pisotro am-bifotsy, vokatra vita amin'ny ronono, fanafody, Vokatra toy ny kasety sy kasety horonantsary.
Fotoana fandefasana: Dec-18-2020
Sarimihetsika Polyolefin Pof Shrink, Horonan-tsarimihetsika Vs Shrink Wrap, Famonosana Polyolefin Pof Shrink, Mihena horonan-tsary horonan-tsary, Mitete Film Pvc, Temperature famonosana polyolefin,